प्रोटोकल काण्डः निधिको डिजाइनमा सभापति देउवाको बधाई ! | Citizen Post News
काठमाडौं । सत्तापक्षलाई गलाउन नसकेका कारण प्रतिपक्षमा रहेको नेपाली कांग्रेसको यसै पनि आलोचना भइरहेको छ । त्यहाँमाथि आन्तरिक किचलोले सभापति शेरबहादुर देउवा कम आलोचित छैनन् । फेरि उनको नयाँ फन्डाका कारण विवादमा तानिएका छन् । कारण हो–भारत सरकारका नवनियुक्त विदेशमन्त्री एस जयशंकरलाई दिएको बधाई ।
०७२ मा संविधान जारी गर्ने बेला त्यसलाई रोक्नका लागि विदेश सचिव जयशंकर प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीका विशेष दूतका रूपमा नेपाल आएका थिए । उनैलाई दोस्रो कार्यकालमा विदेश मन्त्रीमा मोदीले नियुक्त गर्नासाथ देउवाले बधाई दिए, प्रोटोकल मिचेर । भारतको निर्वाचन परिणाम आएलगत्तै देउवाले मोदी र शाहलाई लिखित बधाई पठाएका थिए । मोदीले एस जयशंकरलाई परराष्ट्रमन्त्री नियुक्त गरेपछि देउवाले उनलाई लिखित बधाई पठाएका थिए ।
जयशंकर त्यसबेला दूत मात्रै बनेर आएनन् शीर्ष नेताहरूसँगको भेटमा कूटनैतिक मर्यादा बिर्सिएर अशोभनीय हिसाबले प्रस्तुत भएका थिए । माओवादी केन्द्रका तत्कालिन अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड र नेता बाबुराम भट्टराईलाई त उनले ‘भारतले सहयोग नगरेको भए तिमीहरू अहिलेसम्म सडकमै हुने थियौ’ सम्म भनेका थिए । त्यसपछि उनी फर्किनासाथ नेपालमा नाकाबन्दी लगाइयो, जयशंकर नेपालीका मनमा भिलेन भए । तर, त्यसबेला पनि कांग्रेस र देउवाले नाकाबन्दीको विरोध गरेको थिएन । अहिले बधाई नै दिएपछि काँग्रेस थप नांगिएको छ ।
निधिको अचम्मको विधिः
अहिले देउवालाई गाइड गर्ने नेता हुन्, उपसभापति विमलेन्द्र निधि । फास्ट्रयाक भारतलाई दिनुपर्छ भनी सदनमा नै लविङ गर्ने निधिको विधिअनुसारै देउवाले बधाई दिएको काँग्रेस पार्टी मुख्यालय स्रोतले बतायो । भारतले नेपालको सत्तामा अलटपलट गर्न सक्छ भन्ने ध्यानमा निधिको सोचका आधारमा देउवा चले, जुन पाच्य हुनै सक्तैन ।
जयशंकर विदेमन्त्री हुनासाथ आफ्नो अधिनमा चल्ने सरकार रहेको भुटान भ्रमण पुगेका थिए । उनले श्वसासित बनाउन सक्ने मुलुककै भ्रमण गर्नेछन् । त्यसमा नेपाल पनि आउन सक्ने कतिपयले अड्कल काटेका छन् ।
कम्युनिस्ट फुटाउन चाकरी !
कतिपयले देउवाको यो बधाईलाई भारतीय शक्ति प्रयोग गरी नेपालमा हावी भएको कम्युनिस्ट बहुमतलाई फूटाउने चाकरीका रूपमा पनि टिप्पणी गरेका छन् । एक राजनीतिक विश्लेषक भन्छन्,‘मर्यादा मिचेर बधाई दिनुको कुनै अर्थ लाग्दैन । देउवाले जयशंकरलाई फकाएर नेपालका कम्युनिस्ट विभाजित बनाउने कल्पना गरेका हुन सक्छन् । तर, यति धेरै विवेकचाहिँ उनको छैन, यो निधिकै चलखेल हो ।’
त्यसो त कांग्रेसका अन्य नेताले बधाई दिएको चाल पाए पनि जवाफदेही हुनका लागि आफूलाई बाध्यकारी ठानेनन् । यहाँसम्मकी प्रवक्ता विश्वप्रकाश शर्माले पनि त्यो सभापतिको कुरा रहेको बताउँदै आएका छन् । रामचन्द्र पौडेल पन्छिँदै देउवाको कुरा उनैलाई थाहा होलासम्म भन्ने प्रतिक्रियामा आए । कोइराला परिवार यसै पनि देउवादेखि दिक्क थियो ।
उसलाई यहि बेला प्रतिक्रिया दिने मौका भएका कारण भनिसक्यो–पार्टीको हित र मर्यादाविपरितको काम भयो । बेलामौका देउवाले गर्ने यस्ता उरन्ठ्यौला कामका कारण कांग्रेसको बचेको साख पनि झन गिर्न थालेको छ । यतिखेर प्रोटोकल मिचेर देउवाले बधाई दिएको विषयले सामाजिक सञ्जाल र राजनीतिक बृत्तमा हचलच मच्चिएको छ । तर सभापति देउवा र सिंगो नेपाली काँग्रेस कानमा तेल हालेर बसेको छ ।